Small Toes Surgery (ခြေချောင်းလေးများ ခွဲစိတ်ကုသမှု) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ခွဲစိတ်ကုသမှုများ » Small Toes Surgery (ခြေချောင်းလေးများ ခွဲစိတ်ကုသမှု)
ခြေချောင်းလေးတွေမှာ ဘာပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ။
အဖြစ်များဆုံး ပြဿနာသုံးခုက ခြေချောင်းလေးတွေပုံမမှန်တာ၊ အဆစ်တွေနာတာနဲ့ခြေဖဝါးနာကျင်တာတို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
သင့်ခြေချောင်းလေးတွေကို လှုပ်ရှားအောင်လုပ်ပေးတဲ့ အရွတ်ကြောလေးတွေတင်းလွန်းတာ ဒါမှမဟုတ် အနေအထားမမှန်တာမျိုးကြောင့် ခြေချောင်းလေးတွေ ပုံမမှန်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခြေချောင်းအချင်းချင်း ပွတ်တိုက်တာ ဒါမှမဟုတ် ရှူးဖိနပ်အတွင်းပိုင်းနဲ့ပွတ်တိုက်တာတွေကြောင့်လည်း ဒဏ်ဖြစ်ပြီး နာလာစေပါတယ်။
rheumatoid arthritis လို အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါတွေကြောင့် သင့်ခြေဆစ်တွေကို ထိခိုက်စေ၊ ဒဏ်ဖြစ်စေပြီးပုံသဏ္ဍာန် မမှန်တာမျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
သင့်ခြေချောင်းလေးတွေ ပိုပြီးဖြောင့်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ရှူးဖိနပ်ထဲမှာ ပိုပြီးနေသားတကျဖြစ်လာတာကြောင့် နာကျင်ရောင်ရမ်းတာတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရေမြှုပ်ပျော့ပျော့လေးတွေကို ခြေချောင်းလေးတွေကြားထဲ ခံထားမယ်ဆိုရင် နာကျင်တာတွေကို သက်သာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းပြီး နူးညံ့တဲ့ရှူးဖိနပ်တွေကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒါတွေနဲ့မလုံလောက်ဖူးဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။ အထူးစီမံထားတဲ့ ဖိနပ်အခံပြား ဒါမှမဟုတ် ဖိနပ်တွေကို အသုံးပြုဖို့သင့်ဆရာဝန်ကအကြံပေးပါလိမ့်မယ်။ ခွဲစိတ်မှုကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ၊ အန္တရာယ်တွေအကြောင်းကို ခွဲစိတ်ကုသမှုမခံယူခင်မှာ သင့်အနေနဲ့ကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ မရှင်းလင်းတာ၊ မေးချင်တာတွေရှိတယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုမခံယူခင် ဘာတွေကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားရမလဲ။
သင့်ရဲ့ လတ်တလောသောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ၊ ဓါတ်မတည့်တာတွေရှိမရှိနဲ့ရောဂါတစ်ခုခုရှိတာမျိုးစတဲ့ အခြေအနေတွေကို ဆရာဝန်နဲ့ ကြိုတင်ဆွေးနွေးထားရမှာဖြစ်သလို ခွဲစိတ်မှုမခံယူခင်မှာ မေ့ဆေးဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး အသုံးပြုမယ့် မေ့ဆေးအမျိုးအစားနဲ့ ပုံစံအကြောင်းကို မေးမြန်းဆွေးနွေးရမှာ်ဖစ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှုမပြုလုပ်ခင် ဘယ်အချိန်မှာအစာစားတာ၊ ရေသောက်တာရပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေကို အတိအကျလိုက်နာရပါမယ်။
ဆရာဝန်ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ရပါမယ်။ ဥပမာ-ခွဲစိတ်မှုမပြုလုပ်ခင် ဘယ်နှစ်နာရီအလိုထိ အစာစားလို့ရတယ် စသဖြင့်ပေါ့။ အများအားဖြင့် ခွဲစိတ်မှုမပြုလုပ်ခင်ခြောက်နာရီအလိုလောက်ကစပြီး ဘာအစာမှမစားရတော့ပါဖူး။ ကော်ဖီတို့၊ ရေတို့လို အရည်တွေကိုတော့ မခွဲခင်နာရီအနည်းငယ်အလိုထိ သောက်လို့ရပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အပေ ါ်မူတည်ပါတယ်။
ခြေချောင်း ခွဲစိတ်နေစဉ်ကာလမှာ ဘာတွေလုပ်မှာလဲ။
အမျိုးမျိုးသော ထုံဆေး၊ မေ့ဆေးတွေကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တင်းနေတဲ့ အရွတ်ကြောတွေကို ဖြေလျှော့သွားအောင်လုပ်တာ ဒါမှမဟုတ် ရှည်ထွက်အောင်လုပ်တာ၊ လွဲနေတဲ့အဆစ်ကို မူလနေရာ ပြန်ပို့တာ၊ ခြေချောင်းကိုဖြောင့်အောင်ဆွဲဆန့်တာနဲ့ခြေချောင်းရိုးလေးတွေကို အနေအထားတည့်မတ်မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်တာစတဲ့ ပြုပြင်ခွဲစိတ်မှုတွေကို လိုအပ်သလို ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ခွဲစိတ်ပြီးတဲ့နေ့ ဒါမှမဟုတ် နောက်တစ်ရက်မှာပဲ ဆေးရုံဆင်းလို့ရပါပြီ။ ရောင်ရမ်းတာတွေကို သက်သာစေဖို့အတွက် ခွဲပြီးပြီးချင်း ပထမအပတ်မှာ သင့်ခြေထောက်ကို အချိန်အတော်များများ အပေါ်မြှောက်ထားရပါမယ်။ ပုံမှန်စီးနေကျ နူးညံ့တဲ့ရှူးဖိနပ်ပြန်စီးနိုင်ဖို့ အရောင်ကျတဲ့အထိ ရက်သတ္တပတ်ခြောက်ပတ် ဒါမှမဟုတ် ဒီထက်ပိုကြာကြာစောင့်ဆိုင်းရတတ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ပုံမှန်လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြန်လုပ်လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေမလုပ်ခင်မှာ သင့်ဆရာဝန်နဲ့အရင်တိုင်ပင်ရပါမယ်။ လူအများစုမှာ ခွဲစိတ်မှုကောင်းစွာအောင်မြင်လေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်မှာမရှင်းလင်းတာ ဒါမှမဟုတ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုခွဲစိတ်ကုသမှုမျိုးမဆို အန္တရာယ်ကတော့ရှိတာချည်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီခွဲစိတ်မှုမှာ ဘယ်လိုမျိုးနောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေရှိလာနိုင်သလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းထားရပါမယ်။
ဘယ်လိုခွဲစိတ်မှုမျိုးမှာမဆို ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အန္တရာယ်တွေက မေ့ဆေးနဲ့မတည့်တာ၊ မေ့ဆေးကိုမူမမှန်တုံ့ပြန်တာ၊ သွေးထွက်လွန်တာ ဒါမှမဟုတ် သွေးခဲတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ခြေချောင်းလေးတွေ ခွဲစိတ်မှုအတွက် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေက-
• အရိုးက အနာအကျက်နှေးခြင်း
• ခြေချောင်းလေးတွေ မလှုပ်နိုင်တော့ခြင်း
• ခြေထောက်အရမ်းနာကျင်ခြင်း၊ တောင့်တင်းပြီးမလှုပ်နိုင်တော့ခြင်း
• ခြေချောင်းလေးတွေ ပုံစံမမှန်တာ တဖန်ပြန်ဖြစ်ခြင်း
ခွဲစိတ်မှုမပြုလုပ်ခင် အစာမစားဖို့ ညွှန်ကြားတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် သောက်နေကျဆေးတချို့ကို ရပ်ခိုင်းတာမျိုးအစရှိတဲ့ ဆရာဝန်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကို အတိအကျလိုက်နာမယ်ဆိုရင် ခွဲစိတ်မှုကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို အနည်းဆုံး ဒါမှမဟုတ် လုံးဝမဖြစ်အောင် လျှော့ချလိုက်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/surgicalbrochures/surgery-for-problems-of- the-small- toes. Accessed July 5, 2016.
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီးနောက် သင့်ခန္ဓါကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ